देउवाले छाने सशस्त्रको नयाँ आईजीपी ? नाम सुनेपछि नेताहरु सबै चकित — Imandarmedia.com
देउवाले छाने सशस्त्रको नयाँ आईजीपी ? नाम सुनेपछि नेताहरु सबै चकित
काठमाडौ। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल सोमबारदेखि अवकाशमा जाँदैछन्। महानिरीक्षकको ४ वर्षे पदावधि पुरा गरेर उनी अवकाशमा जान लागेका हुन्। हलचोकस्थित सशस्त्र प्रहरी बलको मुख्यालयमा सोमबार मध्यान्ह उनको बिदाइ समारोह आयोजना गरिएको छ।
सरकारले खनाललाई २०७४ चैत २९ बाट लागू हुनेगरी आईजीपीको जिम्मेवारी दिएको थियो। खनालको अवकाशसँगै उनकै ब्याचका दुईजना एआईजी सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक बन्ने प्रतिस्पर्धामा छन्।
अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजी पुष्पराम केसी र रामशरण पौडेल आईजीपीका प्रतिस्पर्धी हुन्। नेपाल प्रहरीमा २०४९ वैशाख १९ मा इन्स्पेक्टरमा भर्ना भएका पुष्पराम केसी वरियतामा अगाडि छन। पौडेल वरीयताको दुई नम्बरमा छन्।
सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सशस्त्रको आईजीपी नियुक्त गर्ने बताइएको छ। शैलेन्द्र खनालकै ब्याचका केसी र पौडेलमध्ये एकजनाले २० दिन सशस्त्र प्रहरीको कमाण्ड समाल्ने अवसर पाउने छन्।
अर्ध सैन्य संगठन सशस्त्र प्रहरीमा बरियता नमिच्ने परम्परा छ। सो परम्पराका कारण सरकारले केसीलाई आईजीपी नियुक्त गर्ने जानकारहरु बताउँछन्। पुष्पराम केसी अहिले कार्य तथा सिमा सुरक्षा विभागको प्रमुख छन्।
रामशरण पौडेल मानवस्रोत विभाग प्रमुख छन्। सेवा परिवर्तन गरेर सशस्त्र प्रहरीमा आएका उनीहरु दुवैजना २०७९ वैशाख १८ मा अवकाशमा जाँदैछन्। २० दिनका लागि आईजीपी नियुक्त गरेपछि रिक्त हुने एआईजीको सिटमा बढुवा हुन ३ जना प्रतिस्पर्धामा छन्।
एआईजी बढुवा प्रतिस्पर्धामा रहेका डीआईजी राजु अर्याल वरीयतामा अगाडि छन्। वरीयताको दुई नम्बरमा नारायणदत्त पौडेल र तेस्रो नम्बरमा चन्द्र प्रकाश गौतम छन् ।अर्याल र पौडेल २०५४ चैतमा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका थिए।
गौतम चाहिँ २०५२ वैशाखमा सेनाको सह–सेनानीमा भर्ना भएर सशस्त्र प्रहरीमा आएका हुन्। मेरिट लिस्टको एक नम्बरमा रहेका अर्याललाई भावी महानिरीक्षकको रुपमा हेरिएको छ।
तेस्तै,नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट मानिने केसीले ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा आईजीपी खनाललाई हटाउन जोडबल गरे पनि सकेनन्।
तर, यतिबेला नियमसंगत रुपमा २१ दिनका लागि भए पनि सशस्त्रको आईजीपी बन्न पाउने सम्भावना केसीलाई थियो। तर, सरकारले सशस्त्रमा एक दरबन्दी थप्ने र नयाँ एआईजीलाई नै महानिरीक्षक बनाउने तयारी गरेपछि उनको यो सपना पनि पूरा नहुने देखिएको हो।
स्रोतका अनुसार गृह मन्त्रालयले दरबन्दी थपका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ भने अर्थ मन्त्रालयसँग पनि छलफल भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले पनि ‘ग्रीनसिग्नल’ दिएकाले अब मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गरी फागुना पहिलो सातासम्ममा निर्णय गराइने तयारी गरिएको छ।
सशस्त्रको कार्य र सीमा सुरक्षा विभागलाई छुट्याएर एक एआईजीको दरबन्दी सृजना गर्न लागिएको हो । सशस्त्रमा अर्को प्रशासन तथा मानव स्रोत विभागमा पनि एआईजीको दरबन्दी छ। एक दरबन्दी थपिएसँगै सशस्त्रमा एआईजीको संख्या ३ हुनेछ।
सशस्त्र प्रहरीमा हाल दुई डीआईजीहरु अवकाशको क्रममा छन्। हाल प्रवक्ता रहेका डीआईजी मन्दीप श्रेष्ठ र खड्गजीत राईले २६ माघमा अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन।
गत वर्ष उनीहरुको डीआईजीमा एक वर्ष कार्यकाल थपिएको थियो। त्यसैले अब एआईजी बन्ने दौडमा वरियताका आधारमा डीआईजीहरु राजु अर्याल, नारायणदत्त पौडेल र चन्द्रप्रकाश(सीपी गौतम छन्।
वरियतामा सबैभन्दा अघि भएकाले डीआईजी अर्याल हालका महानिरीक्षक खनालले अवकाश पाएपछि वा नयाँ सृजना हुने दरबन्दीमा एआईजी बन्ने सम्भावना बढी छ। नयाँ एआईजी बन्ने अधिकारीले नै महानिरीक्षक बन्ने सौभाग्य पाउने भएका छन्।